Paarlaamaan Itoophiyaa bajata bara dhufuu raggaasise - BBC News Afaan Oromoo
Paarlaamaan Itoophiyaa bajata bara dhufuu raggaasise
Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa bajata bara 2011 irratti mari'achuun sagalee guutuun raggaasise.
Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad baajata bara 2011f ramadamerratti gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa dhiyaateef deebii kennaniiru.
Gaaffileen dhiyaatan keessaa:
•Baajanni ramadame kun karoora misoomaa qabame milkeessuuf hangam ga'aadha?
•Misooma manneen namoota arka-qalleeyyii mana akka argatan taasifamuuf xiyyeeffannaa attamiitu kenname?
•Misooma idustirii keessaa xiyyeefannaan dame maanifaakicheringii maalirra jira?
•Baajanni ramadame invastimantii jajjabeessuuf xiyyeeffannaa kenneeraa?
•Misoomni qonnaa jijjiirama barbaachisu argamsiisee rakkoo sharafa alaa karaan itti fufu jiraa?
•Qaala'insi jireenyaa ammallee akka malee hammaataa jira. Kanaaf, mootummaan maal raawwachuuf karoorfate? Kanneen jedhan turan.
Dr. Abiyyi gaaffilee kanaaf deebii yeroo kennanitti xiyyeeffannaa baajanni bara 2011 irratti fuulleffate miseensota mana mareef ibsaniiru. Baajata bara haaraa qopheessuu keessatti raawwiin ji'oota ja'aa dhuma waggaa gama gamuun baajanni waggaa itti aanu maalirratti akka xiyyeeffachuu qabu adda baasuuf gargaara jedhaniiru.
Haaluma kanaan, xiyyeeffannaan bara baajataa 2011 akkuma duraan ture hiyyummaa hir'isuurratti kan fuullefatedha jedhaniiru. Kunis baajanni kun yeroo qoodamu %64 kan ta'u hiyyummaa hir'isuuf ramadame.
Dhibbeentaan 55 baajata bara 2011 kan kaappitaalaa yommuu ta'u dhibbeentaan 45 ammoo kan idileeti jedhaniiru, Ministirri Muummee Dr. Abiyyi.
Baajanni kaappitaalaa ramadame kunis pirojektoota jalqabamani xumuruudhaaf kan ramadaman ta'us jedhaniiru. Biyyoota ollaa dabalatee baajanni Itoophiyaan kaappitaalaaf ramaddu biyyoota Afrikaarra caalaa ta'uun isaa xiyyeeffannaa hiyyummaa hir'isuurratti xiyyeeffachuu agarsiisa jedhu.
Dr. Abiyyi guddina dinagdee kan bara kanaa yeroo ibsan amma eegameefi karoorfame ta'uu baatus %10 gadi garuu %9 ol akka ta'u waan tilmaamuuf akka Afrikaatti guddaadha jedhaniiru.
Baajatni bara 2011 ramadame kun baajanni naannoleef ramadamu, kan duraan baramerraa haalaan dabaluu ibsanii naannolee guddataa jiran kan akka Affaar, Beneshaangul Gumuziifi Gaambeellaaf deggersa qarshii walakkaa biliyoona tokkotti dhiyaatu ramadeera jedhan Dr. Abiyyi.
Baajata bara 2011 kana kaayyoo ramadameef ooleeraa kan jedhu hordoffiin sadarkaa adda addaatti xiyyeeffannaa addaatiin akka taasifamu dubbatanii, rakkoowwan fayyadama baajataa baroota darbanii akka hin uumamneef hojjechuudhaaf tumsi hunumaa barbaachisaa ta'uu cimsanii akeekkachiisaniiru.
Qaamoleen jijjiirama amma adeemaa jiru hin deeggarre jiru. Bakkeewwan garagaraatti jijjirama kana booreessuuf hojiileen hoijjetaman jiru. Mootummaanis isaan beeka, karaattis hambisa jedhaniiru. ''Sochiileen kunniin abdii duwwaadha,'' jedhaniiru.
Akka Ministirri Muummichaa jedhanitti, invasimantiin kan dubbatamaa jiru guddaadha, garuu hanga dubbatamu hojiirra oolee lammileen irraa fayyadamaniiru kan jedhamu ilaaluu barbaachisaa ta'us xiyyeeffanaa addaan hojjetama.
Invasimantii jajjabeessuuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan dhiyeessuun alatti fuula ifaafi jaalalaan simachuu, nagaafi tasgabbii abbootiin qabeenyaa amantaa nurraa qabaachuu danda'an uumuuf karaa barbaadamuun dandeettii cimsachuurratti ni hojjetama jedhan.
Gama rakkoo sharafa alaa jiru furuuf ammoo misooma qonnaa bu'uurarraa caasaa isaa jijjiiruun, industirii maanifaakcheringii waliin akka waldeggeru taasifama.
Qaala'insa jireenyaa yeroodhaa gara yerootti yaaddoo jireenyaa lammilee ta'e furuuf ammoo daldaltoonni qaala'insi jireenyaa akka uumamu taasisan ni hordofamuun alatti galii lammilee guddisuurratti hojjetama jedhan.
Qabeenya turiizimii jiru fayyadamuuf sirni viizaa rakisaa ta'e foyyeessuun maqaa gaarii daandii qilleensaa biyyattiin qabduus akka carraa gaariitti itti fayyadamuuf hojjetaman jedhan. "Turiizimiin bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuu cinaatti simanaa, tajaajilaa kenninu, nagaafi hojii beeksisuu cimaa nu barbaada."
Ijaarsi biyyaa sekteroota murtaa'an qofaan miti kan jedhan Dr. Abiyyi, tumsa hundumaa barbaada jedhaniiru. "Xiyyeeffannaafi dhamaatii hunda keenyaa barbaada."
Ministirri Muummee dhaabbileen misoomaa mootummaa baankiiwwan biyya keessaa qofarraa liqii Birrii biiliyoona 400 fudhachuunsaanii ibsaniiru.
Raawwiin pirojektoota jajjaboo biyyattiin baroota darban keessa jalqabde karaa heduutiin kasaaraadhaaf kan saaxilame waan tureef, bara baajataa dhufu kana keessatti garuu pirojektii haaraa jalqabuurra isa jalqabame xumuruurratti xiyyeeffatama jedhaniiru.
Akkaataan fayyadama baajataa pirojektoota gurguddoo kan akka humna ibsaa, shukkaaraafi xaa'oo kan baayyee qisaasamee ta'uu heeranii, bara dhufu kana garuu mootummaan kan sirriitti hojjetu hojjetee kan dadhabe garuu dhaabbileen dhuunfaa akka hojjetan dabarsee kenna jedhaniiru. "Hanga ammatti jalqabuu malee xumuruuf kan kaayyefate hin turre."
Hunda caalaa garuu seenaa biyyattiin osoo qabeenya uumamaafi humna namaa ball'aa osoo qabduu hiyyimmaafi gadadoo keessa jiraatti jijjiiruuf karaa adda ta'een hojjetamuu qabas jedhan.
Gama barnootaatiinis Itoophiyaan yeroo ammaa barattota miiliyoona 29 kan qabdu ta'uu dubbatanii, rakkoo qulqullina barnootaa jiru jijjiiruuf karoora addaa yeroo dhiyootti hojiirra ooluuf jiru qophaa'aa jira jedhaniiru.
Baalee Gobbaatti maaltu ta'e?
Marii Ministira Muummee fi paartilee siyaasaa
Dhibee busaa namatti deddeebi'uf falli argame
Afriikaa Kibbaatti shufeerota taaksii 11 ajjeesan
Hirmaannaa Waancaa Addunyaa abbaa murtii Baamlaak Tasammaa
Ozil 'ammaan achi' Jarmaniif taphachu hin fedhu